Ukubuka okumangalisayo kwe-beachfront i-Coronad - I-Airbnb
Ukubuka okumangalisayo kwe-beachfront i-Coronad
U-Margarita Ungumbungazi ovelele
Jabulela ukubuka okumangalisayo e-beachront condo e-Coronado, ihora elilodwa kuphela ukusuka ePanama City. I-condo ilala abantu abangu-4, mhlawumbe abangu-5, futhi inefenisha ephelele, ine-a/c, i-cable TV, i-inthanethi, i-wifi, nakho konke ukuze ujabulele ukuhlala kwakho.
Noma i-Coronado ingaziwa ngokuphila kwayo kwasebusuku, inikeza imisebenzi embalwa yokuzijabulisa ejabulisayo. Kunedlanzana lezindawo zokudlela namabha anamahora okuzijabulisa amasonto onke nokuzijabulisa. Okungenani ngoLwesibili kuya ngoMgqibelo, ungathola uhlobo oluthile lokuphila kwasebusuku. Ungase ufune ukuvakashela i-Picasso Grill and Bar (cishe amabhulokhi amahlanu ukusuka e-condo yethu), indawo yomculo ejabulisayo, ebukhoma, ikakhulukazi ngoLwesithathu ebusuku, lapho abantu bezovela khona ngehora lenjabulo.
Sincoma ukuthi uvakashele e-El Valle, okuyindawo eqhele ngemizuzu engama-40 kuphela. Kuyidolobhana elinokuthula emgodini wentaba-mlilo engasekho, elizungezwe izintaba nehlathi elinefu. Imizila yakhona inokubukwa kolwandle kanti leli paki liyikhaya lezinhlobo zezinyoni zomdabu ezingamakhulukhulu. Ungakwazi futhi ukuhambahamba ehlathini futhi uvakashele impophoma ye-El Chorro Macho, futhi banomugqa we-zip othakazelisayo phezu kwezihlahla. Inesinye seziqiwi eziphelele kunazo zonke ezweni, i-El Níspero Zoo, lapho ungabona khona izinhlobo zezilwane zasendle ezingaphezu kuka-250. Ungase futhi uthathe idiphu ephumuzayo echibini lentwasahlobo eshisayo futhi ujabulele izinzuzo zodaka lwalo olunothe ngamaminerali. Enye indawo okufanele uyivakashele imakethe yendawo enikeza izithelo zasezindaweni ezishisayo, imisebenzi yezandla, i-rum, nezitsha ezimnandi. Ihhotela laseMandarinos linikeza ukudla okuhle kakhulu kanye ne-ambience enhle, vele uqiniseke ukuthi ubhukha kusenesikhathi.
I-Coronado iyibhishi elizimele elinomphakathi oguquguqukayo ohlinzeka ngemisebenzi eminingi kubahlali nezivakashi. ICoronado Resort iyisikhungo somsebenzi esinenkundla yegalofu, ibanga lokushayela kanye nekalishi/izimpahla zegalofu ongaziqasha, kanye nezinkantolo zethenisi ezi-4, iklabhu yasolwandle, amachibi, indawo yokuzivocavoca nezindawo zokudlela, amabha kanye nehhotela. Kukhona izindawo zokudlela ezimbalwa ezinhle kakhulu ezifana ne-Luna Rossa (amabhulokhi amabili), i-Don Chacho Grill, i-Rincon del Chef nezinye ezimbalwa ezihlinzeka ngokudla okuhle kakhulu. Uma ujahile, ungathola i-KFC neMcDonald’s. Kunezitolo ezinkulu ezine ezinhle emnyango, i-El Rey ne-Super 99 ngasohlangothini lolwandle lomgwaqo onguthelawayeka, kanye no-El Machetazo no-Riba Smith ngakwesokudla komgwaqo omkhulu uma uvela e-Panama City. I-Riba Smith incane kakhulu kodwa inikeza izinto eziningi zekhwalithi ephezulu nezinhle kakhulu, kanye ne-French baguette emnandi entsha. Izitolo ezinkulu eziseduze zihlinzeka ngezinhlobonhlobo zokudla, ukuthenga kwasendlini, izitolo ezinkulu, izitolo zezidakamizwa, izitolo zehardware, namasaluni okuzilungisa, imitholampilo namakhasino. Konke lokhu kungatholakala ngasemnyango we-Coronado, okuwuhambo lwemoto lwemizuzu emi-5 kuphela ukusuka e-condo yethu.
UMargarita Ungumbungazi ovelele